Sawirro: Cabsi ka taagan garoonka diyaaradaha Galkacyo & shaqadii oo hakad gashay.
Xaalad adag ayaa maanta ka taagan garoonka diyaaradaha ee magaalada Galkacyo kadib roobab xoogan oo saacadihii ugu dambeeyey ka da’ayey magaalada iyo deegaamada ku hareersan.
Garoonka qaybta ay diyaaraduhu fariissan jireen ayaa waxaa buux dhaafiyey biyaha roobka taasi oo sababtay in diyaaraduhu ay si kumeel gaar ah u istaagan qaybta cagadhigashada (Runway) oo iyada qudheeda biyo jiifaan.
Qaar kamid ah diyaaradihii fariisan jirey garoonka ayaa hakad geliyey duulimaadyadooda inta ay biyuhu fadhiyaan, mana jiro wax tallaabo arrimahaasi wax looga qabanayo oo la qaaday.
Garoonka diyaaradaha Gen Cabdullaahi Yuusuf ee magaalada Galkacyo ayaa waxa uu mar ahaa ilaha dhaqaalaha ugu weyn deegaamada Puntland waxaase uu noqday mid duulimaadyadiisu ciriir gaelen tan iyo dhismaha garoomada Garoowe iyo Boosaaso.
Gaalkacyo waxaa isugu darsamay saddex arimood oo kala ah maamulka garoowe oo an waxba tarin gobalka mudug iyo gobolo kaleba.Labo,maamulka hoose ee Gaalkacyo oo hurda hurdo dheer.Puntlaan oo an helin dhaqaalaha ay helaan xamar iyo Galmudug.
Galmudug waxay dhaqaalo badan heshay wakhtigii Xassan Shiikh oo uu islahaa galmudug hala tartanto puntlaan.Haddana waxuu islahaa doorasada dambe bay cod ku siin doonaan beelaha daga galmudug.Wuuse ku khasaaray.
Haddana waxaa Galmudug shuushaminaya Ina Farmaajo oo sidii Xassan Shiikh oo kale ugu roonaaday dhaqaalo iyo hubba isagoo isleh ka horgee puntlaan,codna ha ku siiyeen.
Atoore nin waalan sidiisaa u hadashey sxb markaa leedahay Garowe iyo Xamar iyo Galmdug baa Galkacayo ka xoolo badan. Saan ogahay Cumar Maxmuud yaa Puntlaan oo idil ugu xoolo badan marka malahan marmarsiiyo ay garoonka dib u cusboonayn waayeen. Garowe si kasta waa isugu dayday inay Galkacayo wax la qabato xitaa madaxweynaha Saciid Dani waa kii beryo dhan joogey oo ku noq noqdey balse reer Galkacayo ayakaan aheyn dad la wadi karo oo wax loo qaban karo. Waa reero shido oo malahan meel loogu soo hagaago. Dacaayada rikhiiska waa laguu dhaamaa sxb.
Xalaal adag iyo cabsi midoodna kama taagana Gaalkacyo, ee barwaaqo iyo roob aan kala go in ayaa ka da’a. Si xun ayaad wax u aragtaa si xun xunna wax waad u sheegtaa. Haddii ay jirto in biyo ay fariisteyn Airporka Gaalkacyo maxey cabsida iyo xaaladda adag oo ka dhalan karta? Dadka ma aha adiga oo kale oo wixii san u arka argagax. Muxuu shakiga, saska iyo qalooca mar kasta ku haya. Be someone boy.